Kunyange hazvo Zimbabwe ichiverengwa pane dzimwe nyika dziri kukwanisa kurwisa HIV/Aids pamwe nekupa dzidziso pamusoro pekudzivirira zvirwere zvepabonde uye kuronga mhuri, vamwe vechidiki vanoti zvakaomera vakawanda vavo kuti vade kuongororwa ropa ravo, kurapwa zvirwere zvepabonde kana kutsvaga zvekudzivirira zvirwere izvi.
Izvi zvakabuda pamusangano weAdolescent Sexual and Reproductive Health Dialogue wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura nesangano reCommunity Working Group on Health nevamwe vechidiki, wekuzeya kuongororwa ropa, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri, pamwe nerwekuzvidzivirira kwevechidiki kubva kuzvirwere zvepabonde kwevechidiki.
Mumwe mukomana anoda kungoziikanwa nezita rekuti Everson, ndemumwe wevechidiki vari muBulawayo, vanodzidzisa vamwe vavo nezveHIV/AIDS, kuronga mhuri pamwe nekudzivirira zvirwere zvepabonde.
Everson anoti nyaya yekuti muzvipatara nemumakiriniki hamuna vanamukoti vakakwana ndeimwe inoita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuongororwa ropa ravo, kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
Everson anotiwo vechidiki vanotya kubuda pachena panyaya dzine chekuita nezvepabonde nekuda kwekuti vanonyara kutaura nevanhu vanenge vari kumakiriniki kana dzimwe nzvimbo dzavanogona kuongororwa ropa ravo kana kuwana ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde.
VaWatson Chiwambo ndemumwezve mukomana wechidiki anoitawo zvekudzidzisa vamwe vezera rake nezveHIV/AIDS.
VaChiwambo vanoti mutemo wekuti vechidiki vari pasi pemakore gumi nematanhatu havakwanise kuenda kuzvipatara kana makiriniki vari vega unokanganisa vechidiki munyaya dzekurwisa HIV/AIDS nzvimwe zvirwere zvepabonde uye kusimudzira ruzivo rwekuronga mhuri.
Mumwe wechidiki anoita zvekurwira kodzero dzevechidiki, Muzvare Bertha Nyoni, vanobvumawo kuti mutemo uyu unokanganisa vechidiki.
VaNhlanhla Moyo vanoshanda nesangano reYoung People’s Network mubazi reSexual and Reproductive Health.
VaNhlanhla vanoti kunyange hazvo chingave chokwadi kuti vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mukeudza kuwana ruzivo pamwe nekurapwa HIV/Aids nezvirwere zvepabonde uye kuronga mhuri, vanoti vechidiki vanofanirwa kuzvipira kuenda kunzvimbo dzinoita izvi.
Murongi wemabasa nesangano reCommunity Working Group on Health, VaMongi Khumalo, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji, kunyanya vechidiki pachavo, vazeye nezvenyaya iyi senzira yekupedza matambudziko avanosngana nawo panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekudzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri.
Munguva pfupi yapfuura, sangano reUNAIDS rakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vechidiki vemuZimbabwe, kunyanya vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi maviri nemashanu havanyanyofarira kunogororwa ropa ravo.
Nyanzvi munyaya dzeHIV/Aids dzinoti kurwisa denda iri kungabudirira chete kana veruzhinji vakaziva mamiriro ehutano hwavo.